Thola lokho esingakubona edolobheni laseScotland iGlasgow | Bezzia
Yini ongayibona eGlasgow
USusana Garcia | 21/04/2021 10:00 | Indlela yokuphila, travel
La idolobha laseGlasgow idolobha eliyitheku eliseduze noMfula iClyde. Leli dolobha laseScotland eLowlands akuyona indawo evame ukuvakashelwa uma kuqhathaniswa ne-Edinburgh, kodwa futhi lifihla nezinto ezithile ezithokozisayo. Kusukela ngekhulu le-XNUMX kuya kwele-XNUMX bekungumuzi ochuma kakhulu futhi onezimboni, ngakho-ke waba nokukhula okukhulu. Namuhla sisengabona izakhiwo zeVictorian nezaseGeorgia, kanye nezindawo zesimanjemanje.
Ake sibone ukuthi yini i- amaphuzu athakazelisayo edolobheni laseGlasgow, okubuye kube ukuvakashelwa okuthakazelisayo. Kuwukuvakasha okuhle uma sise-Edinburgh, ngoba sifika ngaphambi kwehora. Sizokwazi ukubona isikhungo salo esingumlando nendawo ethekwini evuselelwe eseduze nomfula, ngaphezu kwezinye izinto.
1 ISonto LaseSt Mungo
2 IKelvingrove Museum
5 I-Ashton ne-Hidden Lane
6 Isikhungo sedolobha iGlasgow
ISonto LaseSt Mungo
Lona ICathhedral ingesinye sezakhiwo zayo ezindala kakhulu futhi imele isitayela seGothic ngokweqiniso eScotland. Kuyisonto lombhishobhi elakhiwa ngekhulu le-XNUMX futhi elavuselelwa ngekhulu le-XNUMX. Ungavakashela ithuna likaSanta Mungo ongusanta wedolobha futhi otholakala ku-crypt endala kusukela ngekhulu le-XNUMX. Ungawazisa futhi amafasitela amahle anengilazi, yize ekhona manje, nophahla lwangekhulu le-XNUMX. Isonto lombhishobhi elihle kakhulu nokunye kokuvakashelwa okubalulekile edolobheni laseGlasgow.
Kuleli dolobha kuneminyuziyamu eminingi, yize kuyiyona okufanele uyibone futhi ungaphuthelwa uma ungenaso isikhathi esiningi sokuyibona yonke. Le mnyuziyamu izungezwe izingadi ezinhle futhi ayihehi nje kuphela indawo ezungezile, njengoba inemisebenzi eminingi ehehayo. Siyabona emakamelweni abo IBoticelli's 'The Annunciation' noma kaDalí 'kaChrist of Saint John weSiphambano', kanye neminye imidwebo kaVan Gogh noma uRembrandt.
Lokhu okuhle Ingadi yezitshalo itholakala komunye umkhawulo we-West End. Kuyipaki enkulu yomphakathi enhle kakhulu ngezikhathi zonyaka ezifana nentwasahlobo nekwindla. Kule nsimu sithola isigodlo saseKibble, okushisa okukhulu kukaVictoria okufanele sikuvakashele. Indawo ekahle yokuthatha izithombe ezinhle.
Eceleni kweSonto LaseSt Mungo kukhona iGlasgow necropolis enhle. E-Edinburgh ungabonga futhi amathuna amadala amahle, anentelezi ekhethekile ngempela. La mathuna avela esikhathini samaVictoria, ngakho-ke inemininingwane eminingi ezosishiya simangele. Ungahamba uhambe unaka yonke imininingwane esemathuneni futhi ukhuphukele nasethempelini elikhulu ukuyolibona phezulu.
I-Ashton ne-Hidden Lane
Uma uzwa noma yini ngemizila, yimigwaqo emincane, emidala futhi enezinhlamvu lapho ungathola khona umoya omuhle kakhulu edolobheni. Ngakho-ke okunye ukuvakasha lokho ngokuqinisekile uzofuna ukukwenza kufaka phakathi i-Ashton ne-Hidden Lane. I-Ashton itholakala esifundeni seyunivesithi futhi singathola imigoqo nezindawo zokudlela ezinomoya omuhle lapho ungama khona. Kufihliwe kuthule du, kunamakhefi nezitolo ezithile ongathenga kuzo okuthile okuthokozisayo.
Isikhungo sedolobha iGlasgow
Maphakathi nedolobha singabona izindawo ezithokozisayo, ngoba kuyidolobha lapho sithola khona ubuciko nezindawo ezinhle ezingaphambili. IGeorge Square iyisikwele esimaphakathi kakhulu nesikhumbuzo sempi. Ku-Buchanan Street sithola umgwaqo othengisa kakhulu kusuka edolobheni, ngezinye izindlela ezithakazelisayo noma imizila kanye nokukhonjiswa kobuciko basemadolobheni. Futhi singavakashela iThe Lighthouse, isakhiwo esikhetheke kakhulu eMackintosh ebesiyikomkhulu lephephandaba kodwa manje esiyimnyuziyamu evunyelwe mahhala.
Indlela ephelele ye-athikili: Bezzia » Indlela yokuphila » Yini ongayibona eGlasgow
Izithombe zomshado, zihlala zizinhle kanjani?
Yini i-fenugreek futhi isetshenziselwani?